शान्ति हरेक दिन…हरेक क्षण … – Chitwan Post
के जीवनमा शान्ति नहोस् भन्ने चाहना भएको मानिस यो संसारमा होला त ? सबै चाहन्छन्, शान्ति होस् । अधिकांशले के सोच्दछन्– लडाइँ रोकिएपछि शान्ति हुनेछ । तर, शान्ति त यस्तो हुनुपर्छ, जसलाई लडाइँको मैदानमा रहँदा पनि अनुभव गर्न सकियोस् । त्यो वास्तविक शान्ति बाहिर होइन, सबैभित्र छ । प्रत्येक मानिसभित्र ! मानिसले आफूभित्रको शान्तिलाई अनुभव गरेपछि बाहिर आफैँ शान्ति हुनेछ ।
यद्यपि मानिस सृष्टिकर्तासँग धेरै कुरा मागिरहन्छ । सबै सुख, धन–सम्पत्ति, परिवार…तर शान्ति माग्न भने बिर्सन्छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित एउटा कथा छ । एकजना गरिब मानिस थिए । उनी सृष्टिकर्तासँग केही न केही मागिरहन्थे । एकदिन सृष्टिकर्ताले उनी सामु आएर ‘तिम्रो इच्छा के छ ?’ भनेर सोधे ।
पहिला उनले एकदमै धेरै धन मागे । त्यसबाट उनको जीवन राम्रैसँग चल्न थाल्यो । केही समयपछि उनलाई लाग्यो– घर पनि त राम्रो हुनुपर्छ । उनले फेरि प्रार्थना गरे अनि उनको घर एकदमै राम्रो भयो । अब उनी सोच्न थाले– विवाह गर्नुप¥यो । उनले फेरि प्रार्थना गरे । केही दिनपछि एकजना राम्री र सुशील नारीसँग उनको विवाह भयो । केही वर्षपछि उनको परिवार पनि ठूलो हुँदै गयो । त्यसैगरी उनको जीवन चलिरहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि कतै न कतै उनलाई कुनै चीजको खोजी भइरहेकै हुन्थ्यो । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि उनी अशान्त रहन्थे ।
यही क्रममा उनको वृद्धावस्था आयो, त्यसबेलामा उनी सृष्टिकर्तासँग भन्छन्– ‘कृपया मलाई शान्ति दिनुस् ।’ अनि सृष्टिकर्ता भन्छन्, ‘तिमीले त पहिलो दिनदेखि नै शान्ति माग्न चाहिरहेका थियौ, त्यतिखेरै मागेको भए हुन्थ्यो । तर, तिमीलाई अरू–अरू चीजहरुबाट शान्ति प्राप्त होला भन्ने लागेको थियो ।’
प्रेम रावतजीको भनाइ के छ भने जे जति काम हामी गर्दछौँ, ती सबै शान्तिसँग जीवन बिताउनका लागि नै गरिरहेका हुन्छौँ । यदि हामी संसारमा शान्ति होओस् भन्ने चाहन्छौँ भने पहिला हामीले आफ्नै सानो संसारमा शान्तिलाई स्थापना गर्नुपर्छ ।
यदि कतै अशान्ति भइरहेको छ भने त्यसको कारण अरू कोही होइन, मानिस आफैँ हो । वास्तविक शान्ति त्यो हो जसलाई मानिसले आफूभित्र अनुभव गर्न सक्छ । यदि मानिसभित्र नै शान्ति छैन भने बाहिरको शान्ति असम्भव छ ।
मानिसलाई ‘मभित्रै शान्ति छ’ भन्ने कुरा महसुस हुनुपर्दछ । ‘म पनि यो शान्तिको अंशियार हुँ र यो ममाथि निर्भर छ, यदि मैले प्रयास गरेँ भनेँ साँच्चै नै शान्ति सम्भव छ ।’
प्रेम रावतको सन्देश www.premrawat.com र www.timelesstoday.tv मा पनि हेर्न सकिन्छ ।